Yedikuyular Kayak Merkezi’ne Giden Yol Asfaltlanıyor – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean46 KahramanmarasWadada Asphalted to Yedikuyular Ski Center
16 / 09 / 2019 46 Kahramanmaras, Coast Mediterranean, Asphalt News, GUUD, WADADA, TURKEY
wadada asphalting to yedikuyular ski dalxiis
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Yedikuyular Ski Center, gaar ahaan halbowlaha siinaya marin u helida xaafada Bertiz waxay bilaabatay howlo firfircoon.
Baaxadda dhismaha wadada iyo howlaha dayactirka ee Dowlada Hoose ee Magaalooyinka, shaqooyinka aas aasku waxay ka bilowdeen Wadada Yedikuyular. Kooxo ku xirnaa Wasaaradda Sayniska muddo in ka badan gobolka waxay qabanayeen shaqo buuxin. Si looga hor tago in waddaduhu u dumaan, waxaa la saaray rakib duug ah oo hawshii iyo buuxinta ayaa la qabtay. Intaa ka dib, dariiqa ayaa loo diyaariyey asphalt iyadoo la dhigayo qalab.
2 Kun 400 Mitir Waddo
Yedikuyular Ski Center iyo Bertiz Neighborhoods oo bixinaya marin u helida xNUMX kun ee 2 mitir ee shaqooyinka asphalt waxay bilaabeen inay buuxiyaan qaybo ka mid ah halbowlaha. Fen Waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dhir-ka-goynta gobollada halkaas oo aan ku dhameystirno howlaheena buuxinta iyo xisaabinta. 400 kun oo dherer ah oo dhererkiisu yahay 2 mitir iyo xarumo ballac ballaadhan oo mitir ah oo loo yaqaan '400 mitir' oo ballaadhan ayaa lagu dhammayn doonaa waqti gaaban. Magaaladeenu ha fiicnaato ”.
Wadooyinka Asphalting ee Pınarçaya
Gaadiidka taga xaafadaha Bertiz
Wadada Yedikuyular Ski Resort
RayHaber 16.09.2019 Warbixinta Shirka
Dhul iib ah oo laga raaco Xarunta tareenka ee Haydarpaşa